Sergio Aguero Oo Ka Gaabiyay Baas Uu Ka Helay Kevin De Bruyne Waliba Isku Dayay Inuu Dib U Eedeeyo & Qaabkii Waalida Ahaa Ee Uu U Dhaqmay KDB Oo U Jawaabayay Aguero. - GOOL24.NET
April 15, 2019 Apdihakem Omer Adem
Manchester City ayaa shalay guul muhiim u ah xilli ciyaareedkeeda kazoo gaadhay kooxda Crystal Palace balse marka laga yimaado dhacdadaas waxa jirtay dhacdo kale oo kaameradu qabatay isla markaana dhex martay xiddigaha waaweyn ee kooxda ee Kevin De Bruyne iyo Sergio Aguero.
Dhacdadan ayaa ahayd mid kamid ah sawirada uGu waaweyn ee laga qabtay kulanka marka laga yimaado goolkii saddexaad ee Man City ee sababay muranka kale.
Dhacdada ayaa kusoo aaday qaybihii dambe ee qaybta hore ee ciyaarta waxaana wakhtigaas kulanka 0-1 ku hoggaaminayay Citizens oo goolka uga mahad celinayay xiddigooda wacdara dhigaya ee Raheem Sterling.
De Bruyne oo sida qofkasta oo daawaday yaqaano ah shaqsi aad xariif ugu ah baaska ayaa baas u furay Aguero balse weeraryahanka Ayaan raacin dhaqaaqa saaxiibkii isaga oo u muuqday mid aan gabi ahaanba qabin aragtida KDB uu baaska ugu furayay.
Intaa kaddib Sergio ayaa soo jeedsaday isaga oo doonaya inuu falcelin sameeyo lana hadlo De Bruyne waxaana uu u hadlay iyadoo wajigiisa laga dareemayo maagitaan iyo diidmo taas oo dhalisay in De Bruyne uu sameeyo fal-celin uu cadho la qarxay.
Kaamerooyinka ayaa raacday De Bruyne oo qaylinaya una muuqda mid Aguero u sheegaya in isagu qaladka leeyahay waxaana ay intaas kaddib arrintani noqotay mid aad loogu hadal hayo baraha bulshada gaar ahaan barta Twitter-ka.